အလွမ်း သင်္ကြန် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အလွမ်း သင်္ကြန် (၂)
အလွမ်း သင်္ကြန် (၂)
Posted by ဇီဇီ on Mar 31, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 45 comments
ဟိုတစ်နှစ်ကတော့ သင်္ကြန် ကို လွမ်းကြောင်း ရိုးရိုးလေးရေးဖူးတယ်။
မနှစ်ကတော့ စိတ်ပျက်စရာမြင်ကွင်းတွေနဲ့ ဖတ်ရတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ဆရာလုပ်သလိုလိုဆုံးမစာလိုလို ရေးဖူးတယ်။
ဒီ နှစ်တော့ မမြင်အပ် မမြင်ဝံ့တဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးတွေ လည်း မရေးတော့ပါဘူးး။
ကျနော့ သင်္ကြန် တော်တော်များများက နယ်မှာ များတယ်ဗျ။
ဒက်ဒီ အညာဘက် ပြောင်းတဲ့ နှစ်ပိုင်းတွေ ဆို သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်အမှီ နယ်ကို ပြန်ရတယ်။
ပူတာတော့ အတော် ပူပါတယ်။ ရာသီဥတု ကို ပြောတာ။
ဒါပေမဲ့ ပြန်တဲ့ လမ်းတစ်လျှောက် ထနောင်း ရိုးကျဲကျဲတွေနဲ့ လေပူတွေ တိုက်တဲ့ ကြားက ရလာတဲ့ အညာနွေ အနံ့ကို အရမ်းနှစ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်။
သရက်ဖူးနံ့ ရှုရင်း ငုဝါရောင်တောက်တောက်တွေကို ငေးလာရင်း နွေ အပူကို မေ့နေရောပဲ။
နယ်ဘက်က မြို့ပေါ်တွေလောက် မသောင်းကျန်း မရိုင်းပြဘူးးး …
သူ့ မိသားစု ကိုယ်သိ၊ ကိုယ့်မိသားစု သူသိ ပုံစံနဲ့ ခင်မင်ရင် မီးဖိုဆောင်ထိ တန်းဝင်တဲ့ နယ်တွေပေါ့။
အညာမှာမွေးပြီး အညာဓလေ့နဲ့ နေသားကျလို့လားမသိ၊ ပေါင်းတည် လိုက်သွားတုန်းကပဲ မှတ်မှတ်ရရ နေရထိုင်ရတာ ညည်းငွေ့တယ်လို့ ခံစားရတယ်။
အိမ်တွေက စိမ်းစိမ်းကားကား ဖာသိဖာသာတွေ။
ပြန်ဆက်ရမယ် ဆိုရင် ရပ်ကွက် အလိုက်ကို အကြိုနေ့ကနေ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်ထိ ဘယ်အိမ်က ဘာမုန့်၊ဘာချက်မယ် ဆိုတာတွေ တိုင်ပင်ထားလေ့ရှိကြတယ်။
သင်္ကြန်တွင်း အတွက် ဈေးတွေ ကြိုဝယ်ရတာ တော့ မှတ်မှတ်ရရပဲ။
အတာအိုး အသေးလေး ဝယ်ပြီး ….
၇ နေ့ ၇ နံကိုက် အညွန့် အရွက်လေးတွေ စုံအောင် စု ပြီး ထိုးရတာ ဆိုတော့ ….
လဲလို့ရတာလဲ…. (ဥပမာ အုန်းပင်ရှိတဲ့သူနဲ့ ဇီးပင်ရှိတဲ့သူတွေက အုန်းညွန့်နဲ့ ဇီးညွန့် လဲကြတာတို့)
မျှလို့ရတာ မျှနဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပဲ။
ကျနော့ မွေးမေလေ့ကတော့ ……..
နှစ်သစ်အချိန်ဆိုရင် အိမ်မှာ ပစ်ချင်တဲ့ အဟောင်းတွေ၊ လဲချင်တဲ့ အဟောင်းလေးတွေ လဲ တတ်တယ်။ (တရုတ်နှစ်ကူးမှာလည်း ဒီ မှာ အဲလိုပဲဗျ)
ဘုရားကျောင်း က ပစ္စည်းပစ္စယ လဲတာက အစ….
ကြမ်းခင်းဖယောင်းပုဆိုးလဲချင်တာ အဆုံး… နှစ်ကူး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လဲလေ့ရှိတာ။
သောက်ရေအိုးများဆို ဝယ် လာပြီး ရင် ၂ ရက်လောက် ရေဝအောင် ရေကန်ထဲ အရင် စိမ်ထားရသတဲ့။
သစ်သား ရေအိုးစဉ်လေးတွေ ရေစားရင်လည်း အသစ်လဲ ကြတာ။
ဘာ အသားမှ ဘယ်အသားမှ ဆိုတာမျိုးက အစ သံပန်းရေအိုးစဉ်လေးတွေကို ဆေးရောင်သုတ်ပြီး ရောင်းတဲ့ ဆိုင် အဆုံး လူစည်ကားရောပဲ။
ကျနော်တို့ ငယ်တုန်းက ရေခဲသေတ္တာဆိုတာ နယ်မှာ အိမ်တိုင်း မရှိဘူးးရယ်။
ဝယ်လာတဲ့ အသီးအနှံတို့ ဘုရားပန်းတို့ကို ရေအိုးစင်မှာ ၂ ဆင့်ရှိရင် အောက်က အဆင့်လေးမှာ အင်တုံလေး ထားတတ်ကြတာ။
ရေအိုးက စိမ့်လာတဲ့ ရေဓာတ်လေး ရေစက်လေးနဲ့ အထားခံချင်တဲ့ အသီးအရွက်တွေဆို စကာလေးနဲ့ တင်ထားကြတာပဲ။
ဈေးက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဝယ်လာတာမို့ ၁ ရက် ၂ ရက်ကတော့ အထားခံတာပဲ။
ဈေးပိတ်ရက် အတွက် တွက်ဆပြီး ဈေးဝယ်ရတာ အလုပ်ကြီး တစ်လုပ်ပဲ။
ပိတောက်ပင် ရှိတဲ့ အိမ်ကို များ ပိတောက်ဖူးမြင်ရပြီ ဆို မျက်နှာချိုသွေးရတာ အမော။
အဲဒီ အိမ်ရှေ့က အသွားမော့ အပြန်မော့ ငမ်းရတာ။
ငုတွေ စွယ်တော်နီ တွေကတော့ အားကြီးပွင့်တဲ့ ကာလ။
ဘုရားပန်းကိုတော့ သင်္ကြန်ကာလ ပန်းကို မလဲနိုင်ရင် သပြေငုတ်ပါ ပါတဲ့ အောင်သပြေတွေ ထိုးတာများတယ်။
သင်္ကြန်လက်ဆေးမိုးများ ဖြောက်ဖြောက်ရွာရင်တော့ ပူထားတဲ့ မြေပြင်ကနေ အခိုးတွေရော မြေသင်းနံ့တွေရော ထောင်းကနဲ့ ထလာပါပြီ။
နောက်ရက်ဆို ပိတောက်လဲ ပွင့်ပြီ။
ရတဲ့ ပိတောက်ကို ဘုရားပန်းတစ်အိုးထိုးပြီး ပိုတာကို ဟိုလူ့ပေး ဒီလူမျှနဲ့ ဘယ်အိမ်က ပိတောက်က အသေး၊ ဘယ်က အကြီး စတာလည်း ရွေးပန်ရသေးတာ။
မွေးမေလေ့က ပန်းမကြိုက်သလောက် ကျနော်က ပန်းကြိုက်သမားး။
နွေကာလ ဆို သနပ်ခါးပန်းတွေကလည်း ပွင့်တတ်တာကိုးး
သနပ်ခါးသွေးတဲ့ထဲ အဲဒီ အပွင့်ဝါလေးတွေ ထည့်သွေးပြီး လိမ်းရင် အရမ်း နေလို့ကောင်းပြီး အေးနေတာ။
အညာအပူဒဏ်ကို ရှိသလောက် နည်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ရတာပဲ။
သင်္ကြန်ကြို နေ့ကတော့ အတာအိုးလေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ နက်ဖြန် ရေစိုရမဲ့ အရေးတွေးပြီး ပျော်ရတာ။
သင်္ကြန်တွင်းကတော့ မြို့လည်က ရေပက်တဲ့ နေရာတွေကို သွားချင်ရင် သွားး..
ဒါမှ မဟုတ်ရင် အိမ်ရှေ့မှာ ရေပုံးနဲ့ ထွက်ပက်မလား ဒါပဲ ရှိတာ။
ရေတွင်းရှိတဲ့ အိမ်များဆို ရေပက်ရတာနဲ့ ရေငင်ရတာနဲ့ မကာမိဘူးးး
ထီးချိုင်ဘက်နေတုန်းကတော့ ဓလေ့တစ်ခု မြင်ဖူးတယ်။
အပျိုကာလသမီးဆိုရင် ဝိုင်းချုပ်ပြီး ရေကန်တို့ မြစ်ထဲတို့ ပစ်ချကြတာ။
အဲဒီဘက်က ဧရာဝတီမြစ်ဘေးဆိုတော့ လူတိုင်း ရေကူးတတ်တာကိုးးးးး
အဲ ကာလသားတွေကျ ဘာလုပ်တုန်း သိလားး??
အိမ်ထောင်သည် အမကြီးတွေက ဝိုင်းချုပ်ပြီး ထမင်း ဝါးခွံ့ကြတာ။
ခု ရော အဲဒီ ဓလေ့ ရှိသေးလားတော့မသိ မြင်ရတာတော့ ပျော်စရာ။ နယ်ခံ အချင်းချင်း စကြတာများတယ်။
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ဆို မနက်ကတည်းက စောစောထပြီး ဘာလုပ်ရတုန်းဆိုရင် ….
သနပ်ခါး/နံ့သာဖြူ/ကရမက်/တောင်နံကြီး စတာတွေကို ငွေဖလား အသေးလေးနဲ့ ရအောင် သွေးရတယ်။
တရော်ကင်ပွန်း ပြုတ်ထုထားတာကို ထည့်
ရွှေလက်စွပ်လေး တစ်ကွင်းလောက်ထည့် သပြေခက်လေးနဲ့ ဘုရားကပ်ထားရတယ်။
ပြန်စွန့်ပြီးမှ အိမ် နေရာအနှံ့ လိုက်ပြီး ပက်ဖြန်းတယ်။
အဲဒီ တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရတယ်။
မွေးမေလေ့က အဲဒီ အကျင့်ကို ဒီ အထိလုပ်ရဲ့လား လိုက်စစ်တယ်လေ။
စလုံးထိ နံ့သာတုံး မျိုးစုံပါလာတယ်။
ကျနော်လားး??? ဇော်သန့်ရှိတဲ့ သင်္ကြန်ဆို လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သနပ်ခါးတွေ သူ့ သွေးခိုင်းတာကိုးးး
မရှိရင်တော့ ကွကိုယ် တရော်ကင်ပွန်း လေးပြုတ်ပြီးပဲ လုပ်လိုက်တယ်။
နယ်မှာတုန်းက သစ်သားရေနံဝ အိမ်လေ။
ဒီမှာက ဆေးသုတ်နံရံပေါ်မှာ ကျရင် ရုပ်ဆိုးလို့ စတိလောက်ပဲ။
ဘာပဲပြောပြော အဲဒီ အချိန်လေး စိတ်လေး ရှင်းပြီး စိတ်ကောင်းလေး ဝင်နေတာတော့ အမှန်ပဲ။
နေ့ခင်းဆိုရင် ရပ်ကွက်လမ်းမှာ ဘုန်းဘုန်းတွေပင့်ပြီး နှစ်ကူးတရားနာကြတယ်။ ပရိတ်ရွတ်ကြတယ်။
အိမ်ကနေ အပ်ချည်လုံးတို့ ပရိတ်ပန်းတို့ ယူသွားကြတာပဲ။
တရားပွဲက ပြန်လာရင် အိမ်ရှေ့မှာ ပရိတ်ပန်းလေး ချိတ်ပြီး ထားး၊
အပ်ချည်နဲ့ အိမ်ကို စည်းတားသလို လိုက်တားး
အဲဒီ ဓလေ့က ဘယ်နားရောက်ရောက် နှစ်တိုင်း မြင်ဖူးနေတာပဲ။
မလုပ်ချင်ဘူး လို့လည်း ဘယ်သူက မှ မဖောက်ပြန်ဘူးးး
(ဒီ အပိုင်း တဂျီး မဖတ်မိပါစေနဲ့)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ ဓလေ့လေးတွေ လုပ်ရတာ က မန်းဒပ်ပေါ်မှာ ဖော်ချွတ် က နေတာ မြင်ရတာထက်တော့ ကောင်းတယ်ထင်တာပဲ။
သင်္ကြန်ကို နှမြောနေတာ ကြာပြီမို့လို့ ရေးချင်တာလေးတွေ ပြန်ဖော်ရေးလိုက်တာ။
ဘာာာာမှ မြင်ရ၀ူးပေါ့ ပျင်းစယာဂျီးအေ
တောပြန်ပြီး တစ်နှစ် အကျယ်ချုပ် ကျလိုက်ဆိုတာ ဘယ်သူ့မှ ပြောမပြဘူးးး
အို ဂျီးဝါးရဲ့ အတက်ရှိသေးဒယ်ပေါ့နော်..
ထားခဲ့တဲ့ခလေးတွေများ လာကြည့်လှည့်ပါအူးတော့…. :byee:
ငင်င်င်… နာ ခလေးဘယ်နှစ်ယောက်ထားခဲ့မိလဲဟင်င်င်င်
ဆီသည်နဲ့ ဝါးနဲ့ …
ပြိုင်တူ ပျောက်သွားလို့ ထင်ချင်ရာထင်နေရတာ။
အလွမ်း သင်္ကြန်(၂)ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်မိလို့…(၁)ကို ငါကျော်များသွားမိလားလို့ စဉ်းစားဖြစ်သေး…။ သို့သော် မဖြစ်နိုင်…၊ ခု နောက်ပိုင်း ရွာထဲဖလန်းဖြစ်နေတော့ … ပိုစ့်လွတ်သွားတာတော့ မဟုတ်လောက်လို့…။ စာဖတ်လိုက်မှ…မနှစ်ကရေးခဲ့တာကို သွားတွေ့တယ်…။
သင်္ကြန်တော့ ငယ်ငယ်က အဖွားအိမ်ရှေ့မယ် ရေပုံးတွေချပြီး လာသမျှလူ လောင်းခဲ့ရတာ…။ လမ်းကလဲ လူပြတ်တော့…ကိုယ်သာ ရေခြောက်သွားတယ်..၊ နောက်လူတစ်ယောက်လာဖို့က တမျှော်မျှော်ရယ်…..။
တပ်မှာနေစဉ်တုန်းကတော့ အဖေက တပ်အဖွဲ့နဲ့ အတူ က ရမယ်ပြောလို့ နှစ်တိုင်း စိတ်မပါဘဲ ယောဂီပြေးပြေးဝတ်ရတာ…နောက်ဆုံး အဖေတောင် သနားလာလို့ ကဖို့ မပြောတော့တဲ့အထိ…။
ဒီနှစ် သင်္ကြန်ကတော့……တောင်ကြီးမယ် ဖတ်ဖို့အရမ်းလိုအပ်နေတဲ့….စာအုပ်ထူကြီးတစ်အုပ်နဲ့ အချိန်ကုန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင့်….။
အဖေ ဌာနက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်း ပျော်စရာဂျီးနေမှာ ညီမလေးရဲ့။
ကျနော်လည်း ဟိုနေ့က အဲ့လိုလေးရေးမလားတောင် တွေးနေသေး ။
သင်္ကြန်ဟာ အရင်ကလို ရင်ခုန်စရာ မကောင်းတော့ဘဲ နှမြောစရာ ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ ။
အရင်ကဆိုရင် သင်္ကြန်ရောက်ခါနီး နှစ်လလောက်အလိုကတည်းက ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ ရောက်မယ့်နေ့ကို လက်ချိုးရေနေမိတာ…
ရေလောင်းရေပတ်ဆိုတာရယ်..လူကြီးမိဘတွေကို ဝိုင်းဝန်းပြုစု ကုသိုလ်ယူကြတာရယ်တွေဟာ
အခုနောက်ပိုင်း… ကျနော် ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ နှစ် ၂၀၀၇ လောက်ကတည်းက ရန်ကုန်သင်္ကြန်ဟာ စိတ်ပျက်စရာအတိ…
မူးကြ ရူးကြ… ဖော်ကြ ချွတ်ကြ…
ဘယ်လို ကြည့်ကြည့် ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ဓါတ်မတည့်တော့တာ…
အဲဒါနဲ့ပဲ… ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်း သင်္ကြန်ဆို အိမ်တွင်းပုန်း…
၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းမတော့ သင်္ကြန်ဆို…နယ်တွေဘက် ခရီး ထွက်…ပြေး….
မမဂျီးတို့ လူဂျီးသူမ ကြီးတွေဖြစ်သွားပြီလားဟင်??
ငယ်တုန်းကလည်း ခရစ္စယာန် မို့သင်္ကြန် မပျော် ရ
ခုတော့ လည်အသက် ကစကားပြောလာလို့ မလည်ရ
အာ့ကြောင့် သင်္ကြန် ဆို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို
မမဂျီးတော့ ပွဲတော်တိုင်းကို ပျော်တယ်။
၉၆၉ တွေတောင် အမျိုးဘာသာသာသနာအော်ပြီး.. ဟိန္ဒူသင်္ကြန်ကျရင်ပျော်ကြမှာ…။
ဒါဆို သင်္ကြန် က ထေရဝါဒ နဲ့ မဆိုင်ဘူးပေါ့
​အော်​ ​ဟော့ ဗြဟ္မဏ ဝါဒီ​တွေ ဒီ​နေရာ လာစု​နေတာကိုး
​နေ၀န်းနီလည်း ပဋိက မကုန်​ခင်​က သင်္ကြန်​ဆိုတာ ဘာလားညာလားနဲ့ ​ယောင်​ခဲ့ဖူး ။ ခု​တော့ ကိုယ်​ဝါဒနဲ့ မဆိုင်​ဘူးလို့ပဲ သတ်​မှတ်​ထားမိ ။
တမင်​လုပ်​မယူ တဲ့ မတူတဲ့ အ​တွေးနဲ့ ~
သများရဲ့ ဟိုဘက် ဒီဘက် အဘိုး ရဲ့ အဘိုးအဘွားဒွေက
ဗျန်မာဂျီး ၄ ဦးရယ်ပါ။
ညနေ ၆ နာရီနောက်ပိုင်းရေလုံးဝမပက်ရ
ကလေးဘဝကနေ အသက် ၂၂ လောက်ထိ မန်းလေး သင်္ကြန်ပျော်ခဲ့တာပါဗျာ။
ခု ဘာဖြစ်သွားမှန်းကို မတွေးတတ်တော့ပါဘူးးး
.ဒီနှစ် သင်္ကြန် လည်းအရင်နှစ်လိုပဲ
အန်ဒရယ် မရှိအောင်ပျော်နိုင်ရင်ကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးနော့။
က​လေးတုန်းက က​လေးအ​လျောက် တစ်နေကုန် ရေ​ဆော့ လျှောက်​လည် မြဝတီနဲ့ မြန်​မာ့အသံကို ထိုင်ကြည့် အဲ့လိုနဲ့ပျော်​ခဲ့တယ်
တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ ပထမနှစ်​မှာ မွေးသမိခင်​က ခရီးထွက်တော့ ပါသွား ဒုတိယနှစ်​ကျ ရိပ်​သာဝင်
(အတက်နေ့ ပြန်​ထွက်​တယ်​ဆိုတာ လုံးဝမ​ပြောဝူး) တတိယနှစ်​မှာ မဏ္ဏပ်​ထိုင် (စိတ်တွေပျက်) နောက်​တစ်​နှစ်​ကျ အိမ်​တွင်းအောင်း မနှစ်​က ဘုန်းကြီးဝတ် ဆိုတော့
သ​င်္ကြန်​ကို ဝေဖန်​ဖို့ အ​တွေ့အကြုံ စုံရဲ့လား လို့တောင် ပြန်တွေးမိနေတယ်
ကိုယ်​တိုင်​ကပဲ အရမ်း အစွန်းရောက်နေမိပြီး အဆိုးတွေမြင် စိတ်တွေကုန်နေမိသလားတော့ မသိ
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲတော်အနေနဲ့ မြင်ရအူးမယ်ထင်ပါတယ်။
သင်္ကြန်ကတော့ သိတတ်စကတည်းက ခြောက်နှစ်ဆက်တိုက် ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တော့ သေသေချာချာ မသိခဲ့ပါဘူ။ ငယ်သူမို့မသိပါ။
ကျောင်းစတက်တဲ့နှစ်မှာ လည်ဖြစ်တော့ ကိုယ်ကြွေဖူးတဲ့ ဆရာက ကိုယ့်ကို ကားချင်းကပ်ရပ်တွေ့တော့ ရေဆင်းလောင်းသွားတာ ကျုံးဘေး မှာ
( ကျောင်းပြန်တက်မှ အသဲကကွဲရှာတာလေ )
မိုးလင်းတာနဲ့ ကားစထွက် မိုးချုပ်မှ သိမ်းတဲ့အထိ မီးကုန်ယမ်းကုန်လည်ဖူးတယ်
လူလည်း သင်္ကြန်ပြီးတော့ မဲသဲကျန်ခဲ့တာပဲ
နောက်ပိုင်းစိတ်ကုန်စပြုတော့ ကျစွာချောင် ၀ါးချက်မှာ ၅ နှစ်ဆက်တိုက် ရိပ်သာဝင်ပလိုက်တာ
နှစ်ဆန်းတရက်ဆို ဓူတင်တွေပါ ဆောင်တယ်
နောက်ပိုင်း အခါတွင်းဆို ခရီးတွေ ထွက်ကျင့်ရှိလာတာ ကြာပေါ့
ပထမဆုံးခရီးထွက်ဖြစ်တဲ့ နှစ်ကတော့ ရေရှားပါးတဲ့ တောင်ထိပ်တခုပေါ်ရောက်နေခဲ့တယ်
ရေရှားပါတယ်ဆို ရေသန့်ဘူးထဲက ရေနဲ့ရေလာခိုးလောင်းလို့ ဇာတ်လမ်းတခု စခဲ့ဖူးတယ်
ဘာလိုလိုနဲ့ ဇာတ်သိမ်းခဲ့တာတောင် သိပ်မကြာလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် လောလောလတ်လတ်
ဒီနှစ်လည်း နောက်ဆုံးလောကနတ်ပြည်လို့ တင်စားထားတဲ့ နေရာတခုကို သွားဖို့
အိပ်မက်နောက်တခု အကောင်ထည်ပေါ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်
သူကမှ သင်္ကြန်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ များသေးသဟ။
ပြန်​​ရော မုနိ့ဖိုး​ပေးမယ်​ဆို​ရေးမယ်​ ​လေ​နော်​
ကိုကိုခင်​​ဇော်​က ​ချောလိုက်​တာ နုဖပ်​အုအပ်​​နေတာဘဲ
သွသူ ပို့(စ) ရေးချင်တာကို ကိုကိုခင်ဇော်က မုန့်ဖိုးပေးရမယ် ဟလားးး
ရွာသင်္ကြန်တွေဆို သိပ် ကြိုက်/ပျော် တာ။
အူးလေးရမ ပေးမယ်ပြော အူးလေးနဲ့ ချည်ထား
ကျန်းးးး နာ့ဂို ပျံလာချင်အောင် ဖျာယောင်းနေဒါ
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ သင်္ကြန်တွေကို ပြန်တွေးကြည့်မိတယ်…။
ပြန်လိုချင်လောက်တဲ့ သင်္ကြန် ကို မဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးဘူး…။
အခု ညီးက အလွမ်း သင်္ကြန် ဆိုတော့…
ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရီးဇား ၃၅ ယောက် ကို ပြန်လွမ်းကြည့်မိတယ်…။
ဒီနှစ် သင်္ကြန်မှာ သောက်ဖို့
မြန်မာဘီယာ ပုလင်းတွေ ၀ယ်စုနေပြီ…။
ယူနန် က ၀က်ခေါက်ကင်လေး နဲ့ ဆို
ဪ။ ဟွာလေ၊ ကျနော့ အသက်နဲ့ တူတူပဲလို့ ပေါဒါဘာ။
ရေခဲသုတ်တို့လောက်တော့ အဝ စားသောက်ပါတယ်။
ဟိုးအရင်​က မန်း​လေးတို့ဘာတို့ရထားနဲ့သွားရင်​ ဘူတာ​ဘေး ​ရေအိုး​လေး​တွေနဲ့​ရေ​ရောင်းသူ​တွေ… ​ဈေး​ရောင်းသူ​တွေဆို.. သကြန်​မတိုင်​ခင်​တလ​လောက်​ကတည်းက. ရထားရပ်​ရင်​​ဈေး​ရောင်း…ရထားဘူတာကစထွက်​တာနဲ့ ပါလာတဲ့​ရေနဲ့ ရထား​ပေါ်​လောင်းတာ… အရမ်းစိတ်​ဆိုးပဲ… တံခါးပိတ်​ထားရင်​ ပိုဆိုး… တံခါးကမလုံ​တော့ တံခါးကဖုန်​​တွေပါကိုယ့်​​ပေါ်​ရောက်​တာ… အခု​တော့ ရထားလည်းမစီးဖြစ်​တာ..ဆယ်​စုနှစ်​တစ်​စုမက​တော့…
ရထားနဲ့ သွားရင် အဲဒီ ဒုက္ခရှိတယ်။
သင်္ကြန် မုန့်လုပ်နည်းလေးတွေ တင်ပေးးး
သူတို့သင်္ကြန်များ လွမ်းစရာ… ခုချိန် သင်္ကြန်ဘာလုပ်ဖူးလဲ စဉ်းစားရင် ဘာအမှတ်တရမှ ထွက်မလာတော့ဘူး… သင်္ကြန်ဆို နေပူပူ ရေစိုစိုနဲ့ ရေထွက်ပက်ရင်း နဂိုက မဖြူတဲ့အသားတွေ ပြာသွားတာပဲ မှတ်မိတော့တယ်..
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်ဆို အမေက ဘုရားဆင်းတုတွေအကုန် ရေသပ္ပာတယ်တယ်… (ဘုရားစင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ပဲ ထားပါတော့..) ကိုယ်က အဲဒါတွေလုပ်ရတာ ပျင်းတယ်ဆိုတော့ အမေ့ကိုကြည့်ပြီး ပင်ပန်းနေတာ.. (ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းချက်)… အဆောင်နေတုန်းကဆို အစ်မတွေက သင်္ကြန်နားနီးရင် စောင်တွေ ခြင်ထောင်တွေ သေချာပြန်လျှော်တယ်.. ငင့်.. ရုံးပိတ်ကာနီး အလုပ်တွေရှုပ်နေတော့ မလုပ်နိုင်ပါဘူးရယ်.. ပြန်ရင်လည်း လေးလို့ သယ်မသွားဘူး.. အားမှပဲ လျှော်လိုက်တာပဲ…
အနှစ်ချုပ်ရင်တော့ နှစ်ဟောင်းတွေ နှစ်သစ်တွေ ဘာမှခေါင်းထဲမရှိဘူးရယ်.. (သများက မလစ်တလစ်.. မတစ်တတစ်… ဟီး)… အဆင်ပြေတဲ့အချိန် အဆင်ပြေသလို လုပ်လိုက်တာပဲ.. တရားစခန်းဝင်တာတို့ သီလရှင်ဝတ်တယ်တို့ ဆိုတာကလည်း ပိတ်ရက်ရှည် ဒါလေးပဲ ရှိလို့ လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပဲ… ဒီနှစ်တော့ စားလိုက်အိပ်လိုက် အခွေကြည့်လိုက်နဲ့ အိမ်မှာ အပြည့်နားပစ်မယ်..
မမဂျီး မွေးမေလေ့ကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခိုင်းလို့ အိမ်အလုပ်ဟေ့ဆို ဦးချိုးခါးချိုးအကုန်လုပ်ခဲ့ရတာ။
အဲ၊ အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းရေးမှာ အင်မတန်ဇီဇာကြောင်သော် အဖေနဲ့ နေရတာဆိုတော့ ပိုလုပ်ရတယ်။
နှစ်ကူးတိုင်း ရှင်းရတာလောက်က အပျော့(စ) ဖြစ်နေတာ။
ဒီ ရောက်တော့ ဖုန်မရှိတဲ့ အရပ်မှာ သက်သာနေတာ။
အလွမ်းတွေကို ခေါင်ရည်ထဲထည့် မျှောလိုက်မိမယ်ထင်ပါရဲ့
ဆာဆာနဲ့ ထမင်းဆီဆမ်းကို ငါးကြော်လေးနဲ့ စားခဲ့ဖူးတာ သတိရ.
ရှမ်းပြည်သင်္ကြန်ဆိုမိုးရွာတဲ့ဒေသမှာကြီးခဲ့ရတော့ ချွိပြောတဲ့မြင်ကွင်းမျိုး တခါမှမမြင်ဖူးဘူးရယ်။ ငယ်ငယ်ကသင်္ကြန်ဆိုတာ အိမ်ကနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်တက်ရတဲ့ပွဲလို့ပဲ မှတ်မိနေဒယ်။ အိုက်မြို့မှာက သင်္ကြန်တွင်းဆို တနေ့တနေ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း နှစ်ဆယ်ကနေသုံးဆယ်အတွင်းရောက်အောင် အပြိုင်သွားတတ်ကြတာကလား။ မန်းတပ်ဆိုတာကလဲ စတုဒီသာမန်းတပ်ပဲရှိတာ။ အိမ်ရှေ့ရေပုံးချပက်ပြန်တော့လဲ မိုးရွာတာရယ် လူမရှိတာရယ်ကြောင့် အလွန်ဆုံးနှစ်နာရီတောင်မပြည့်တတ်ဖူးရယ်။ ကြီးလို့ပြည်မဖက်ရောက်ပြန်တော့လဲ ဘာမှမရှိတဲ့မြို့မို့ အိမ်ထဲအိပ်လိုပ်စားလိုက်နဲ့မို့ ခုထိသင်္ကြန်ဆိုရင်သိပ်ရင်မခုန်ခဲ့ဖူးဘူး။
ကျနော် နမ္မတူမှာ သင်္ကြန် ၂ နှစ်နေဖူးတယ် ယောက်ခမွ။
ရေကို မထိနိုင်ဘူးးး၊ အေးတာ။
ဘယ်တုန်းက မှ မပျော်ခဲ့ရတဲ့ ၂ခုထဲက တစ်ခု ယောင်လို့တောင်လှည့် မကြည့်ဘူး
အရင်ကလည်းမဆိုင်နိုင်ခဲ့ ဘူး ခုလည်း မပိုင်ဘူး ဆိုတာသေချာတယ် ဘာလနု့ လွမ်းရမလည်း မလွမ်းဘူး မမှတ်မိဘူး မသိချင်ဘူး မပတ်သတ်ဘူး
တမင် မေ့ထားတာတင် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ မင်းငါ့ကို ဖြားယောင်းလို့ မရတော့ပါဘူး ကွာ
ဘယ် တုန်းကတည်းကမကျေနပ်တာတွေ လာအော်သွားတာတုန်း??